Netizen Report: Hisitraka Ny ‘Zo Hohadinoina’ Ve Ny Indoneziana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2016 15:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, bahasa Indonesia, English
Sary azon'ny rehetra ampiasaina. Tsy voalaza ny tompony
Vonona ho firenena Aziatika voalohany hampihatra ny “zo hohadinoina” i Indonezia. Tamin'ny 1 Novambra, nanambara drafitra handinihana indray ny Lalànan'ny Fifanarahana sy ny Vaovao Elekitronika ny manampahefam-panjakana, amin'izay ny olom-pirenena afaka mitaky didim-pitsarana mangataka amin'ireo mpamatsy votoaty antserasera mba hanaisotra vaovaon'ny raharahan-keloka bevava sy sivily nanenjehana azy ireo, raha afaka madiodio izy ireo.
Mbola tsy navoaka ny lahatsoratry ny lalàna nahitsy. Saingy nilaza ny manampahefana fa mihatra amin'ireo mpamatsy votoaty antserasera avokoa ny fitsipika, izay midika fa izay rehetra andry mamoaka vaovao antserasera — manomboka amin'ny Google ka hatramin'ny tranonkalam-baovao ao an-toerana — dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny fanaisorana votoaty ho setrin'ny didim-pitsarana. Izany fepetra izany dia lasa lavitra mihoatra noho ny nolanian'ny Vondrona Eoropeana, izay hahafahan'ny mpiserasera mangataka amin'ny milina fikarohana mba hanaisotra rohy tamin'ny fikarohana tamin'ny anaran'izy ireo manokana. Mety hiatrika sazy ireo mpamatsy votoaty tsy manaja ny baiko, saingy tsy mbola fantatra mazava izay aterak'izany.
Nilaza ireo mpanohana izany politika izany fa ny olona “tafiditra tamin'ny raharaham-pitsarana heloka bevava na sivily ka afaka madiodio sy te-hamafa ny anaran'izy ireo” ihany no mety ampiasa izany. Tamin'ny tafatafa niarahana tamin'ny Jakarta Post, naneho ny ahiahiany momba ny fepetra i Wahyudi Djafar, mpisolovava mpikaroka ao amin'ny Ivon-toeranan'ny Fikarohana Politika (fanaovan-dalàna): “Mampidi-doza ny fanomezana fahefana feno ny fanjakana hanatsahatra ny fidirana amin'ireo votoaty voaràra satria mety hitera-doza goavana amin'ny fanararaotam-pahefana,” hoy izy.
Nakaton'ny manampahefana Tiorka ny aterineto ao amin'ny faritra Kiorda
Nakaton'ny fanjakana Tiorka ny fidirana terineto ao amin'ireo tanàna 11 ao Kiordistan noho ireo hetsi-panoherana tamin'ny 26 Oktobra. Mitaky ny famotsorana an'i Gültan Kisanak sy Fırat Anli, samy ben'ny tanàna ao an-tanànan'i Diyarbakir ny mpanao fihetsiketsehana, nosamborina tamin'ny 25 Oktobra izy ireo noho izy ireo voalaza fa mpikambana ao amin'ny Antokon'ny Mpiasa Kiordistan, izay heverin'ny governemanta Tiorka fa fikambanana mpampihorohoro. Nanomboka ny 26 Oktobra hatramin'ny 31 Oktobra, nisy ny fahazarana fisian'ny fikorontanana tsy mitsahatra maharitra 12 ka hatramin'ny 27 ora. Ankoatra ny fanakanana amin'ny fidirana amin'ny aterineto, nahatonga ireo banky sy milina fakàna vola tsy afa-niasa ny fanakatonana, ka sahirana ny orinasa sy ny olona te hividy sakafo sy fitaovana.
Mbola mikatona ny WhatsApp ao Yemen
Nobahanana tao amin'ny tambajotran'ireo mpamatsy tolotra finday lehibe ao Yemen ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza WhatsApp hatramin'ny 5 Oktobra [mg]. Raha mampiasa fitaovana fanivahana ny mpanjifa sasany hialana amin'ny fanakanana, dia manohintohina ny fifandraisana eo amin'ireo olom-pirenena an-tapitrisany kosa izany. Araka ny loharanom-baovaon'ny Global Voices ao Yemen, nakatona manerana ny firenena ankehitriny ny fampiharana, rehefa avy nobahanana tsindraindray. Mety noho ny antso hanaovana fihetsiketsehana hanoherana azy ireo natao tao amin'ny WhatsApp sy Telgram no anton'ny fanakatonan'ny mpikomy Houthi, izay mifehy ny renivohitra Sanaa, ny WhatsApp. Nosakanana tao Yemen ihany koa ny Telegram.
Tonga ao Iran ny Vodafone
Hanomboka fiarahamiasa amin'ny telco HiWAB Iraniana ihany koa ny goavan'ny fifandraisandavitra Vodafone ao amin'ny Fanjakana Mitambatra atsy ho atsy mba “hanavao ny foto-drafitrasa sy hanitatra ny tolotra telefônina an-tariby sy aterinetom-pinday ho an'ny olon-tsotra sy orinasa mpanjifa,” hoy ny tatitra avy amin'ny Wall Street Journal. Tsy azo hodian-tsy hita ny mety ho tsikombakomba eo amin'ny Vodafone sy ny foto-drafitrasa fanaharamaso ny fifandraisandavitra efa misy ao Iran, indrindra fa noho ny Vodafone tsy dia manana laza tsara ao amin'ity faritra ity. Tamin'ny 2009, nanambara ny orinasa fa nanome tahirim-pifandraisana tany amin'ny manampahefana Ejiptiana noho ny fangatahan'izy ireo hamantatra izay mpirotaka manohitra ny fanjakana manao fihetsiketsehana noho ny krizin'ny mofo.
Voasazy nandoa onitra ny Skype noho ny tsy fanajana ny didim-pitsarana
Nosazian'ny fitsarana Belza 30.000 Euro ny Skype noho izy tsy nanaja ny didim-pitsarana hihaino antso amin'ny raharahan-keloka bevava tamin'ny 2012. Nilaza ny orinasa, izay an'ny Microsoft fa tsy azo atao ara-teknika ny mampihatra ny fangatahana tamin'izany fotoana izany, noho ny firafitry ny fitaovana. Mikasika ny resaka ara-pahefana momba ny fangatahana, nilaza ny orinasa fa tsy tokony hanaraka ny lalàna momba ny fihainon-dresaka elektronika ao Belzika izy satria “mpamatsy rindrambaiko” fa tsy mpamatsy tolotra.
Nahazo kapoka i Soeda amin'ny kamerà drôna
Namoaka fitsipika vaovao ny Fitsarana Tampony Ara-pitantanana ao Soeda fa tsy ara-dalàna intsony ny fampiasana fakantsary amin'ny drôna raha tsy misy ny fahazoan-dalana, nametraka ny didim-pitsarana fa anisan'ny fakantsary fanaraha-maso ny fakantsary drôna .
Noferan'ny manampahefana Amerikana ny fangalàna lahatahiry ataon'ny mpamatsy tolotra aterineto
Namoaka lalàna vaovao afaka mametra ny fomba fampiasa sy fivarotana lahatahiry ataon'ny mpamatsy tolotra aterineto ny Vaomiera Federalin'ny Fifandraisana Amerikana, amin'ny alalan'ny fanomezana zo ho an'ny mpanjifa mba handràra ny mpamatsy tolotra aterineto azy ireo tsy hizara vaovao manokana saro-pady momba azy ireo. Izany dia hanakanana ireo mpamatsy tolotra aterineto any Etazonia tsy hampiasa ny lahatahiry azon'izy ireo avy amin'ny mpiserasera entina hanaovana dokambarotra amin'ny fitaovan'ny mpiserasera. Hotakiana amin'ireo mpanome tolotra aterineto ihany koa ny filazana amin'ireo mpiserasera izay lahatahiry nangonin'izy ireo sy ny antony ary mampahafantatra azy ireo sao mety tratran'ny poritsaka ny lahatahirin'izy ireo.
Tratra ny Tsingerin-taona ry Wayback!
Nankalaza ny faha-20 taonany tamin'ny Oktobra ny Internet Archive (Arisiva Aterineto). Malaza kokoa amin'ny hoe Wayback Machine ny Arisiva, izay ahitana ny tahirin'ireo tranonkala maherin'ny 370 tapitrisa sy pejy miisa 273 miliara. Saingy ho fankalazana izany, namoaka fitaovana vaovao, – GifCities, milina fikarohana ho an'ny GeoCities GIF, sahaza tsara ny fanembonana ny taona 90 amin'izao fotoana izy.
Afef Abrougui, Renata Avila, Ellery Roberts Biddle, Bojan Perkov sy Sarah Myers West no niara-nanoratra ity tatitra ity.